Sole Proprietorship Kubatsira uye Kukanganisa
Rwega proprietorship ibhizimusi iro munhu mumwechete ane rake risina kurongeka sekambani, LLC kana chimwe chinhu. Isu tinowanzoona vanhu vachitaura kuti ndiwo mabhizimusi ari nyore kutanga, uye iri nyore mhando bhizinesi mhando. Dambudziko hombe nderekuti munhu wepakati anotambura nematare mashanu muhupenyu hwake. Uye kuronga bhizinesi seyega proprietorship inosiya iye muridzi pachezvake mhosva. Zvese zvikwereti zviri pamutemo uye zvemari zvebhizinesi zvinoyerera zvichipinda kumuridzi. Nekudaro, kunyange imwe iri nyore kutanga, iri sarudzo ine njodzi kubva pakuona kwechisungo. Nekudaro, haisi sarudzo yakanakisa kutora mukana wekudzivirirwa kwechikwereti uye zvakanakira mutero.
Sole Proprietorship vs. Corporation kana LLC
Sangano rakarongeka uye rinoshanda rakamisikidzwa kana LLC rakavakirwa-mutoro kudzivirirwa. Kana mumwe munhu akamhan'arira wega proprietorship, kune rimwe divi, zvinhu zvemuridzi zviri panjodzi yekubatwa. Zvakare, mari yese yebhizimusi inobhadhariswa semari yemuridzi. Uyezve, kune mashoma mutero mabhenefiti kana dzimba dzekugara pane idzo dzinopihwa nemabhizinesi akabatanidzwa. Kupfuurirazve, kunyangwe hazvo mumwe achigona kushandisa "DBA," hapana chechokwadi kupatsanurwa kwepamutemo pakati pemuridzi nebhizinesi. Izvi zvinodaro nekuti hapana chakaparadzaniswa chepamutemo semuridzi uye bhizinesi rakafanana. Mukupesana, kana iwe ukaumba mubatanidzwa kana LLC iyo kambani iri yakaparadzaniswa zviri pamutemo "munhu" kubva kuvaridzi.
Nei Vanhu Vachiumba Sole Proprietorship
Vanhu kazhinji vanoshandisa chete proprietorship mamiriro ezvinhu apo mumwe munhu ari kutsvaga iri nyore nzira yekutora bhizinesi pasi. Chaizvoizvo, kana munhu angotanga kuita bhizinesi, wega proprietorship iripo. Muchiitiko chekuti muridzi anoda kugoverana muridzi (mubatanidzwa, semuenzaniso), ipapo rakasiyana bhizimusi modhi inoda kutariswa. Muridzi wega anogona kuita chero bhizimusi repamutemo chero nguva, uye chero kwavanosarudza, zvichitarisirwa nemvumo yekupihwa marezenisi. Zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vanhu vachengetedze mabhizinesi avo sevoga zvivakwa zvinotevera.
Mumwe munhu ndiye muridzi webhizinesi
Muridzi webhizinesi anoda mashoma mapepa uye kurambidzwa zviri pamutemo
Iye muridzi haana hanya nenyaya dzemazuva ano kana dzemangwana
Iye muridzi haana hanya nekutorerwa mutero kunowanikwa kumakambani.
Kubatsira uye Kukanganisa kweSole Proprietorship
Seyega muridzi, chero mari kubva kubhizinesi inogona kushandiswa nemuridzi munzira ipi neipi yaanoona yakakodzera. Nekudaro, iye muridzi webhizinesi zvakare anoverengera kurasikirwa kwebhizinesi. Saiye wega muridzi, munhu mumwe chete anoita sarudzo dzebhizinesi kukambani. Izvi zvinoreva kuti hapana kudikanwa kwechero zvimiro zvechokwadi, misangano yegore nevaridzi / vanogovana sarudzo pamutemo, zano, nezvimwe. Iye muridzi ndiye anoita zvese izvi zvisarudzo. Kunewo zvakare zvine mwero mutero bhenefiti kune wega proprietorship. Semuenzaniso, mumwe anogona kubvisa kurasikirwa kwebhizinesi kubva kune yese yakashumwa mambure mari. Izvi zvinogona kubatsira kudzikisa mutero wese mutero mune zvimwe zviitiko.
Pamusoro pezvo, wega proprietorship inobvumidza kushoma kwemapepa uye zviitwa. Kune mashoma mashoma epamutemo anodikanwa kutanga kana kushandisa bhizinesi. Iko hakuna kudikanwa kwemisangano yepamutemo, kuchengetedza maminitsi, kana kurekodhwa kurekodhwa, nezvimwe. Sezvazviri, vamiriri venyika nevemunharaunda vangangoda marezinesi mamwe chete avanogona kuda kune chero bhizinesi bhizinesi.
Pfupiso yeZvakanakira zveSole Proprietorship
Mari inowanikwa pamusoro pemitero yemuridzi
Muridzi anoita sarudzo dzebhizinesi
Nyore ye "kutanga kumusoro"
Kune rimwe divi remari, isu tinowana iyo isingagumi yemunhu mvumo yezvisungo uye zvikwereti zvekambani. Ichi, chiitiko chinotaurira, ndechimwe chekukanganisa kukuru kwega kwega proprietorship. Izvi zvinoreva kuti, kusiyana nekambani, mhosva yakaunzwa kupokana nebhizinesi iri zvakare mhosva kumuridzi. Izvi zvinogona kuisa zvinhu zvako pachako panjodzi. Mhosva yebhizinesi inogona kutora ako maakaundi ebhengi, zvivakwa, uye kunyangwe mamwe marudzi emaakaundi ekurega basa mune zvimwe zviitiko.
Imba yega yega inewo nguva yakatarwa. Bhizinesi rinonyungudika panofa muridzi, akasiya bhizinesi, kana kupunzika. Iyoyo nyaya imwecheteyo kana muridzi akasunga kutengesa bhizinesi kune mumwe munhu, kana boka revanhu. Kazhinji neako wega proprietorship, hapana zvakanyorwa zvakarongedzwa munzvimbo yekutamisa kwevaridzi. Saka ingori nyaya yekutengesa bhizinesi zvinhu uye maakaundi anogamuchirwa, kana paine.
Nekuda kwekugadzikana kwakazara uye hurefu hwehunhu hwega, kutora nekuchengetwa kwevashandi vepamusoro kunogona kuoma. Kupfuurirazve, kukwidziridza capital ndiyo imwe nzvimbo kune imwechete proprietorship ine kunetseka kukuru. Vashandi vemari vanowanzozeza kuisa mari mune imwe chete pfuma nekuda kwekutsvaga kune chikwereti uye pfungwa yakaderera yehutano.
Uye zvakare, vazhinji varidzi vezvivakwa vanofanirwa kuvimba nezvinhu zvavo kana zvikwereti kuti vabhadhare bhizinesi ravo. Kupfuurirazve, iyo yega proprietorship haigone kutora nyore nyore kune vadyidzani pasina kuenda kune yakanyanya kudzora maitiro uye kusefa. Chinhu chega chinosiiwa chinotenderwa ne IRS ndecheicho chemurume - kana murume kana mukadzi anezvake achishandira kambani, kunyangwe asiri mukwikwidzi kana kontrakta yakazvimiririra, iyo yega proprietorship inogona kudzivirira kuda kuendesa mubatanidzwa mari mutero unodzoka.
Pfupiso yeZvakaipa zveSole Proprietorship
Isingagumi yemunhu chikwereti kuzvikwereti uye zvisungo zvebhizinesi
Mitero yemitero haina kukura senge nemakambani akabatanidzwa
Zvinhu zvako zvinogona kuve nenjodzi mumatare ebhizinesi
Kurera "kunze" capital uye kuwana kuvimba kwevatengesi kunogona kuoma zvakanyanya
Kana chinangwa chako chiri chekukudziridza kambani yako munzira ipi neipi, kukohwa kusingaperi kwemitero, chengetedza zvinhu zvako kubva mukuremerwa zviri pamutemo uye zvemari, uye kukwezva vangangoita mari kune bhizinesi rakarongeka uye rinomhanyisa bhizinesi, wobva waisa bhizinesi rako, ndiko kuti, kuumba mubatanidzwa - ndiyo nzira yekuenda.